Nezvedu - Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co, Ltd.
Shanghai IVEN Pharmatech Injiniya Co, Ltd.
Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co, Ltd. yakavambwa muna 2005, ine mafekitori mana ehunyanzvi emuchina wemishonga, yeropa yekuunganidza chubhu michina, michina yekurapa mvura uye otomatiki kurongedza & akangwara logistic system.
Isu tinopa yakasanganiswa yeinjiniya mhinduro yefekitori yemishonga yepasi rose uye fekitori yezvokurapa mukutevedzera EU GMP / US FDA GMP, WHO GMP, PIC / S GMP musimboti etc. kambani yedu inowirirana padhuze neanozivikanwa masayendisiti ekutsvagisa kwesainzi uye mishonga yeindasitiri yekugadzira masangano ekupa iyo inonzwisisika dhizaini dhizaini, yemhando yepamusoro michina uye yakasarudzika sevhisi yemakemikari / ekurapa mafekitori anobva kunyika dzakasiyana.
IVEN yakasanganiswa yeinjiniya mhinduro yemishonga uye yekurapa fekitori inosanganisira yakachena kamuri, auto-kutonga uye kuongorora system, mishonga yemvura kurapwa system, mhinduro kugadzirira uye kuendesa system, yekuzadza uye kurongedza system, akangwara logistics system, mhando kutonga system, yepakati rabhoritari zvichingodaro . Inotarisa pane zvinodikanwa nevatengi, IVEN inogadzirisa mhinduro dzeinjiniya zvine hungwaru kune vashandisi pa:
Isu takatumira kunze mazana emidziyo kune dzinopfuura nyika makumi mana, takapawo anopfuura gumi emishonga Turnkey mapurojekiti uye akati wandei ekurapa Turnkey mapurojekiti. Nekuedza kukuru nguva dzese, isu takawana makasitoma edu akakwira makomendi uye tikamisa zita rakanaka mumusika wepasi rose zvishoma nezvishoma.
Zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi vanobva pasirese, IVEN ichienderera mberi ichiita tsvagurudzo yakadzama uye kudzidza pamusoro pekuvandudzwa kwemishonga uye indasitiri yezvokurapa, nyatsoteerera kugadzirwa kwekuchengetedza kwemishonga uye zvigadzirwa zvekurapa, kuteedzera kusimudzira kusingaperi kwemishini yedu uye chirongwa mhando. Tichabatana nemwoyo wese nemakambani emishonga uye ekurapa kubva pasirese, kukura pamwe chete uye nekuedza kusasimba kwehutano hwevanhu.
* Kugadzira maitiro dhizaini
* Concept dhizaini uye yakadzama dhizaini yekuvaka
Une matambudziko anotevera？
• Izvo zvakakosha zvechigadzirwa dhizaini hazvina mukurumbira, dhizaini haina musoro.
Dhizaini yekudzamisa haina kuenzaniswa, kuitiswa kwacho kwakaoma.
• Kufambira mberi kwechirongwa chekugadzira chiri kunze kwekudzora, chirongwa chekuvaka hachiperi.
• Hunhu hwemidziyo haugone kuzivikanwa kusvikira wakundikana kushanda.
• Zvakaoma kufungidzira mutengo kusvikira warasikirwa nemari.
• Wakatambisa nguva yakawanda pakushanyira vanotengesa, kutaurirana dhizaini yekugadzira uye manejimendi manejimendi, enzanisa imwe mushure meumwe zvakare uye zvakare.
Iven inopa yakasanganiswa mainjiniya mhinduro yepasi rese yemishonga uye yekurapa fekitori inosanganisira yakachena kamuri, auto-kutonga uye kuongorora system, mishonga yemvura kurapwa system, mhinduro kugadzirira uye kuendesa system, yekuzadza uye kurongedza system, otomatiki logistics system, mhando yekudzora system uye yepakati rabhoritari uye nezvimwe zvinoenderana nezvinodiwa nemitemo mumaindasitiri emakemikari emunyika dzakasiyana uye zvinodiwa nemutengi, IVEN inochengetedza huinjiniya mhinduro dze turnkey chirongwa uye kubatsira vatengi vedu kuhwina mukurumbira uye chinzvimbo mune yakaiswa indasitiri yemishonga kumba.
Yedu R&D kugona kweMishonga yemishonga ye IV mhinduro akateedzana zvigadzirwa iri mune yakatungamira nhanho mune epamba uye epamberi nhanho pasi rose. Iyo yakanyorera pamusoro pemakumi matanhatu emagetsi epamutemo, inogona kupa yakazara seti mvumo magwaro evatengi 'zvigadzirwa kugamuchirwa uye GMP chitupa. Kambani yedu yatengesa mazana ezvinyoro bhegi IV mhinduro yekugadzira mutsara kusvika kupera kwa2014, inoverengera makumi mashanu muzana yemugove wemusika; girazi bhodhoro IV mhinduro yekugadzira mutsara inogadzira anopfuura 70% mugove wemusika muChina. Plastiki bhodhoro IV mhinduro yekugadzira tambo yakatengeswawo kuRussia, Central Asia uye Southeast Asia nezvimwewo Inowana kurumbidzwa kunobva kune vese vatengi. Kambani yedu yakavaka hukama hwakanaka hwebhizinesi pamwe neanopfuura mazana matatu IV mhinduro vagadziri muChina, uye vakawana mukurumbira wakanaka muRussia, Uzbekistan, Pakistan, Negeria nedzimwe nyika makumi matatu. Isu tave vanosarudzika Chinese brand kana pasirese IV mhinduro vagadziri vari kutenga.Our mishonga michina fekitori ndiyo imwe yenhengo dzakakosha dzeChina Mishonga Yezvigadzirwa Association, National technical Committee yeMishonga Mishonga Kusimudza, uye anotungamira anogadzira wePraceutical Production Machina muChina. Isu tinonyatso kudzora michina mhando, zvichibva pa ISO9001: 2008, tevera iyo cGMP, European GMP, US FDA GMP uye WHO GMP zviyero etc.
Isu takagadzira akateedzana emidziyo yekusangana nezvinodiwa zvakagadziriswa, senge Isiri -PVC Saga Bhegi / PP bhodhoro / Girazi bhodhoro IV mhinduro yekugadzira mutsara, otomatiki ampoule / vial kuwacha- kuzadza-kuvhara chisimbiso yekugadzira mutsara, wemuromo wemvura yekuwacha-kuomesa- kuzadza- yekuisa chisimbiso yekugadzira mutsetse, dialysis mhinduro yekuzadza-yekuisa yekugadzira tambo, yakatemwa sirinji yekuzadza-kuvhara chisimbiso yekugadzira tambo etc.
Mvura Inorapa Midziyo：
Iyo yepamusoro-tech mubatanidzwa hunyanzvi muR&D uye yekugadzira RO yuniti yeMvura Yakacheneswa, yakawanda-inogonesa mvura distiller system yeMvura YeJekiseni, yakanatswa steam jenareta, mhinduro yekugadzirira masisitimu, ese marudzi emvura uye mhinduro yekuchengetedza tangi, uye nzira dzekuparadzira .
Isu tinopa mhando yepamusoro michina dhizaini uye gadzira zvinoenderana neGMP, USP, FDA GMP, EU GMP nezvimwe.
Auto Kurongedza uye Warehouse System & Zvivakwa Chidimbu：
Semutungamiri wekugadzira zvinhu zvine otomatiki uye zvine hungwaru kubatanidzwa kwekuchengetera system, isu tinotarisa pane iyo auto kurongedza uye yekuchengetera system zvivakwa R&D, kuronga, kugadzira, mainjiniya uye kudzidziswa.
Ipai vatengi iyo yose yekubatanidza system kubva kuAuto Kurongedza kuenda Warehouse WMS & WCS mainjiniya ane mhando yepamusoro uye yakanaka sevhisi, senge robhoti carton kurongedza muchina, yakazara otomatiki katoni ichizarura muchina, otomatiki logistics system uye otomatiki matatu-epamhepo ekuchengetera system etc.
Nemhinduro dzinodhura-zhinji, mapurojekiti edu uye zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira mishonga, chikafu, maindasitiri emagetsi uye indasitiri yezvigadzirwa nezvimwe.
Vacuum Ropa Unganidzo Tube Mashini Kudyara：
Isu takatarisa pamhando yepamusoro, inoshanda, inoshanda uye yakadzikama yeropa yekuunganidza chubhu yekugadzira michina uye inoenderana otomatiki system. Isu takagamuchira yepamusoro-soro yekutsvaira ropa kuunganidzira chubhu yekugadzira tekinoroji mumakore makumi maviri apfuura, uye isu takagadzira mazera akati wandei eiyo Vacuum Ropa Kuunganidza Tube Mitsara Yekugadzira, iyo yaisimudzira iyo yekutsvaira ropa yekuunganidza gadzira indasitiri kusvika padanho repamusoro pasirese.
Isu tinoita nhamburiko huru pahunhu hwechigadzirwa uye hunyanzvi hunyanzvi, isu takawana anopfuura makumi maviri mavara patent yeropa rekuunganidza chubhu yekugadzira michina. Isu tinovandudza michina yehunyanzvi nhanho inoenderera uye tigova mutungamiri uye musiki weChina ropa rekuunganidza chubhu yekugadzira michina indasitiri.
Munyika shanu dzeCentral Asia, zvigadzirwa zvemishonga zvakawanda zvinotengwa kubva kune dzimwe nyika, tisingatauri nezvejekiseni jekiseni. Mushure memakore akati wandei ekushanda nesimba, isu takatovabatsira kuti vabude munhamo imwe mushure meimwe. MuKazakhstan, takavaka hombe yekubatanidza mishonga yemishonga inosanganisira maviri eSoft Bag IV-Solution Production Lines uye ina Ampoules Injection Production Lines.
MuUzbekistan, takavaka PP Bhodhoro IV-Solution Pharmaceutical Fekitori, iyo inogona kuburitsa mamirioni gumi nemasere ebhodhoro pagore. Iyo fekitori haina kungovaunzira chete hupfumi hwakawanda asi zvakare inopa vanhu vemuno mabhenefiti anooneka pakurapa kwemishonga.
MuRussia, kunyange hazvo indasitiri yemishonga yakatanga kare, zvese zvishandiso uye tekinoroji zvichiri zvechinyakare. Mushure mekushanyirwa kwakawanda kwemidziyo yeEurope uye tichienzanisa vakasiyana veChinese vatengesi, iyo hombe Injection Solution Pharmaceutical Mugadziri akatisarudza isu kuti tiite mabhodhoro ePP IV-Solution Project pakupedzisira, iyo inogona kuburitsa 72 mamirioni ePP bhodhoro pagore.
Africa ine huwandu hwevanhu, umo indasitiri yemishonga inogara isina kusimba, inoda kunetsekana. Parizvino, tiri kuvaka Soft Bag IV-Solution Pharmaceutical Factory muNigeria, iyo inogona kuburitsa mamirioni makumi maviri esaga rakapfava pagore. Isu tichaenderera mberi nekuvaka mamwe emhando yepamusoro mafekitori emishonga mu Africa, uye tinoshuvira kuti vanhu vemuno mu Africa vagowana rubatsiro runobatika nekushandisa yakachengeteka mishonga yezvigadzirwa zvekugadzira kumba.
ZveMiddle East, indasitiri yemishonga iri kutanga, asi vanga vachinongedzera kuUSA FDA nezano repamberi uye mwero wepamusoro wekutarisa mishonga yavo yemhando uye mafekitori emishonga. Mumwe wevatengi vedu kubva kuSaudi Arabia akatipa odha kwatiri yekuita iyo yose Soft Bag IV-Solution Turnkey Project kwavari, iyo inogona kuburitsa anopfuura mamirioni makumi maviri nemaviri eshegi rakapfava pagore.
Mune dzimwe nyika dzeAsia, indasitiri yemishonga yakaisa hwaro, asi hazvisi nyore kwavari kuti vavake yepamusoro fekitori IV-Solution. Mumwe wevatengi vedu veIndonesia zvakare, mushure mekutenderera kwesarudzo, akatisarudza isu, tinoshandisa simba rakasimba kwazvo, kuvaka yakakwira-kirasi IV-Solution Pharmaceutical Fekitori munyika yavo. Isu tapedza yavo phase 1 turnkey chirongwa nemabhodhoro 8000 / awa iri kufamba mushe. Uye yavo chikamu 2 ne12000 mabhodhoro / awa, isu tinotanga kuisirwa mukupera kwa2018.
Sechikwata chehunyanzvi chine zvinopfuura makore gumi zviitiko uye zvakaunganidzwa zviwanikwa muParamende indasitiri, huwandu hwakawanda hwekutenga zvigadzirwa ndehunhu hwakanaka, Kukwikwidza mutengo, mutengo wakakwira unoshanda uye unobatsira.
Nehunyanzvi hwekudzora sisitimu uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, dhizaini uye kuvaka kwedu zvakateerana neFAD, GMP, ISO9001 uye 14000 yemhando system zviyero, Iyo michina inosimba kwazvo uye inogona kushandisa kazhinji makore anodarika gumi nemashanu. (Stainless simbi zvigadzirwa zvinowanikwa kweanopfuura makore makumi maviri. )
Dare redu rekugadzira rinotungamirwa nenyanzvi zhinji dzezvemakemikari indasitiri ine hunyanzvi hwekugona, hunyanzvi mukudzamisa, kusimbisa ruzivo, Kusimbisa zvizere kuitwa kwakanaka kweprojekti.
Nekuverenga kwakangwarira, kuronga zvine musoro uye mutengo weakaunzi zvine hungwaru systematization, manejimendi manejimendi uye nekugadzirisa mutengo wekuvaka webasa, nekudaro simbisa kuti mabhizinesi ane purofiti yakanaka.
Nechikwata chevashandi chehunyanzvi chinotsigirwa pamhepo nepamhepo mumitauro yakawanda, se: muchiRungu, ChiRussian, ChiSpanish, ChiFrench, ect, nekudaro ita chokwadi chepamusoro uye nebasa rinoshanda.
• Anopfuura makore gumi zviitiko pane Turnkey chirongwa muFarmaceutical munda ine hunyanzvi hwakanyanya hwehunyanzvi hwekuisa uye kuvaka, mapurojekiti akateedzera kune FDA, GMP uye European Union uye kumwe kuongorora.
Project Case Mharidzo
Ini Pre-kutengesa technical Rutsigiro
1.Tora chikamu mukugadzirira basa reprojekti uye upe rairo rezano mukati mekugona apo mutengi anotanga kuita chirongwa cheiyo chirongwa uye mhando yemidziyo kusarudza.
2.Tumira anoenderana mainjiniya mainjiniya uye vekutengesa vashandi kuti vaite zvakadzama kutaurirana nehunyanzvi zvinhu zvemutengi uye ipe yekutanga michina mhando sarudzo sarudzo sarudzo.
3. Govera maitiro flowchart, data rehunyanzvi uye dhizaini yemidziyo inoenderana nemutengi pakugadzira kwake chivakwa chefekitori.
4. Ipa muenzaniso weinjiniya wekambani kuti mutengi ataure panguva yekusarudzwa kwemhando uye dhizaini. Panguva imwe chete ipai zvinoenderana zvinhu zveinjiniya semuenzaniso kwehunyanzvi kuchinjanisa.
5. Ongorora kugadzirwa munda uye muitiro kuyerera kwekambani. Ipa magwaro ane chekuita neye logistic manejimendi sisitimu uye yehunhu kudzora system.
II Project Management iri Kutengeswa
1. Nezve iyo projekiti nekondirakiti yayo yakasainwa, kambani inoitisa manejimendi manejimendi inovhara maitiro ese kubva pachibvumirano kusaina kusvika cheki yekupedzisira uye kugamuchirwa kweprojekiti. Matanho ekutanga ndeaya anotevera: kusaina chibvumirano, pasi chirongwa girafu kutsunga, kugadzirwa nekugadzirisa, gungano diki uye kugadzirisa dambudziko, yekupedzisira gungano kugadzirisa, kuendesa kutarisisa, kutumira kwemidziyo, kugadziriswa kwekugadzirisa, kutarisa uye kugamuchirwa.
2. Iyo kambani ichagadza injinjiniya ane ruzivo rwakawanda mukutungamira kweprojekti semunhu anotungamira, anozotora mutoro uzere we manejimendi manejimendi uye nekubatanidza. Mutengi anofanira kusimbisa iyo yekupakata zvinhu uye osiyira muyenzaniso. Mutengi anofanira zvakare kupa izvo zvemutyairi kumhanya panguva yegungano uye kugadzirisa mamiriro emutengesi mahara.
3. Chekutanga cheki uye kugamuchirwa kwemidziyo zvinogona kuitwa mufekitori yemutengesi kana fekitori yemutengi. Kana cheki uye kutambirwa kukaitwa mufekitori yemutengesi, mutengi anofanira kutumira vanhu kufekitori yemutengesi kuti aongorore uye kutambirwa mukati memazuva manomwe ebasa mushure mekugamuchira ziviso yekugadzirwa kwemidziyo yakapedzwa kubva kumutengesi. Kana cheki uye kugamuchirwa kukaitwa mufekitori yemutengi, michina inofanirwa kuburitswa uye kuongororwa pamwe nekuvapo kwezvinhu kubva kumutengesi nemutengi mukati memazuva maviri ebasa mushure mekunge mudziyo wasvika. Iyo cheki uye yekugamuchira mushumo inofanirawo kunge yapera.
4. Chirongwa chekumisikidza michina chinotemerwa kuburikidza nechibvumirano chemativi ese. Vashandi varo vanogadzirisa vanozotungamira kuisirwa zvinoenderana nechibvumirano uye kuitisa kudzidziswa kwemunda kwevashandi vevashandisi uye vekuchengetedza.
5. Pamamiriro ezvinhu ekuti mvura, magetsi, gasi uye zvekugadzirisa dambudziko zvapihwa, mutengi anogona kuzivisa nenzira yakanyorwa mutengesi kuti atumire vashandi kumidziyo yekugadzirisa zvinhu. Mari inoshandiswa pamvura, magetsi, gasi uye yekugadzirisa zvinhu inofanirwa kubhadharwa nemutengi.
6. Iko kukanganisa kunoitwa muzvikamu zviviri. Iyo michina yakaiswa uye mitsara yakaiswa muchikamu chekutanga. Muchikamu chechipiri, iyo debugging uye mutyairi kumhanya kunoitwa nemamiriro ekuti iyo yemushandisi mweya inonatsa uye mvura, magetsi, gasi uye debugging zvinhu zviripo.
7. Nezve cheki yekupedzisira uye kugamuchirwa, bvunzo yekupedzisira inoitwa zvinoenderana nechibvumirano uye bhuku rekurairidzwa kwemidziyo pamberi pevashandi vese vemutengesi uye nemutengi anotarisira. Yekupedzisira cheki uye yekugamuchira mushumo izere kana bvunzo yekupedzisira yapera.
III Zvinyorwa Zvehunyanzvi Zvakapihwa
I) Kuisa dhata yekudzidzira (IQ)
1. Chitupa chemhando yepamusoro, bhuku rekuraira, runyorwa rwekutakura
2. Kutumira runyorwa, runyorwa rwekupfeka zvikamu, ziviso yekubvisa dambudziko
3. Kuisa madhayagiramu (kusanganisira dhizaini dhizaini, dhizaini yekubatanidza pombi, dhizaini yenzvimbo, dhizaini yemagetsi, dhayagiramu yedhiraivha, bhuku redzidziso rekumisikidza nekusimudza)
4. Chinyorwa chekushandisa chezvikamu zvikuru zvakatengwa
II) Dhata yekuita basa (PQ)
1. Fekitori yekuongorora mushumo pamusoro pekuita paramende
2. Chitupa chekugamuchira
3. Chitupa chezvinhu zvakakosha zvemuchina mukuru
4. Izvozvi zviyero zvechigadzirwa chinogamuchirwa zviyero zvechigadzirwa
III) Dhivhosi yekuita data (OQ)
1. Kuyedza nzira yemidziyo technical technical parameter uye performance index
2. Maitiro ekushanda akasarudzika, maitiro akajairika ekugezesa
3. Maitiro ekuchengetedza uye kugadzirisa
4. Maitiro emidziyo kusagadzikana
5. Kuiswa kukosheswa rekodhi
6. Rekodhi yehunyanzvi hwekuita
7. Pilot run qualification rekodhi
IV) Kuongorora kwekushandisa kwemidziyo
1. Basic inoshanda inoshanda (tarisa pane yakaremerwa huwandu uye kujekesa)
2. Tarisa kuenderana kwechimiro uye kunyepa
3. Rinoshanda bvunzo ye otomatiki kutonga vanodikanwa
4. Kupa mhinduro inogonesa iyo yakazara seti yemidziyo kusangana neGMP kuongororwa
IV Mushure mekutengesa Service
1. Gadzira mafaira emidziyo yevatengi, chengeta chisina kumisikidzwa cheni yezvipenga, uye upe rairo kune yevatengi yekuvandudza tekinoroji uye kutsiva.
2. Simbisa yekutevera-system. Shanyira mutengi nguva nenguva kana iyo yekumisikidza kumisikidza uye kugadzirisa matambudziko kwapera kupa ruzivo rwekushandisa kumashure munguva kuitira kuti uone kurira, kugadzikana uye kuvimbika kwekushandisa kwemidziyo uye kubvisa kunetseka kwevatengi.
3. Ita mhinduro mukati memaawa maviri mushure mekugashira mutengi zvekushandisa kukundikana ziviso kana basa rinodiwa. Rongedza vashandi vekuchengetedza kuti vasvike panzvimbo iyi mukati maawa makumi maviri nemana, uye maawa makumi mana nemasere panguva ichangopfuura.
4. Hunhu garandi nguva: 1 gore mushure mekugamuchirwa kwemidziyo. "Zvitatu zvivimbiso" zvinoitwa panguva yemhando yevimbiso nguva inosanganisira: garandi yekugadzirisa (yemuchina wakazara), garandi yekutsiva (yekupfeka zvikamu kunze kwekukuvara kwakaitwa nevanhu), uye garandi yekudzoreredzwa (kwezvisarudzo zvikamu).
5. Gadzira chichemo chebasa. Icho chinangwa chedu chekupedzisira kushandira vatengi vedu zvirinani uye kugamuchira kutarisirwa kwevatengi vedu. Isu tinofanirwa kugumisa zvine mutsindo kune chiitiko chekuti vashandi vedu vanotsvaga kubhadhara panguva yekumisikidzwa kwemidziyo, kugadzirisa dambudziko uye nehunyanzvi sevhisi.
V Kudzidzisa Chirongwa Chekushandisa uye Kugadzirisa
1. Nheyo yekudzidzira ndeye "huwandu hwakawanda, mhando yepamusoro, kukurumidza uye kudzikisa mutengo". Iyo yekudzidzisa chirongwa chinofanirwa kushandira iyo yekugadzira.
2. Kosi: Yechokwadi dzidziso uye inoshanda kosi. Dzidziso yezvidzidzo iri kunyanya yemidziyo yekushandisa musimboti, chimiro, mashandiro, maitiro ekushandisa, matanho ekuchengetedza, nezvimwe. Iyo nzira yekudzidzisa yekudzidzira yakatorwa kosi inoshanda inoita kuti vadzidzi vakurumidze kugona basa, kugadzirisa zuva nezuva, kugadzirisa dambudziko uye kugadzirisa matambudziko zvishandiso uye kutsiva uye kugadzirisa kwezvikamu zvakatsanangurwa.
3. Vadzidzisi: Dhizaini hombe yechigadzirwa uye nyanzvi dzehunyanzvi
4. Vanodzidziswa: Vashandi vanoshanda, vashandi vekuchengetedza uye vane hukama vashandi vevatengi kubva kumutengi.
5. Yekudzidzisa modhi: Iyo yekudzidzira chirongwa inoitwa kunzvimbo yemidziyo yekugadzira nzvimbo yekambani kekutanga, uye chirongwa chekudzidzisa chinoitwa kunzvimbo yekugadzira yemushandisi kechipiri.
6.Kurovedza nguva: Zvinoenderana nemamiriro ezvinhu emidziyo nevadzidzi
7. Mari yekudzidzira: Kupa ruzivo rwekudzidzisa rwemahara uye kugarisa vanodzidziswa mahara uye kuchaja pasina mari yekudzidzira.
Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Muchina À Coudre Led, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer, Disposable Syringe & Tsono Production Line,